Ibe Nesasasa I-2019 Paediatric Child Health and Paediatric Surgery Update – School of Clinical Medicine
Home » News » Ibe Nesasasa I-2019 Paediatric Child Health and Paediatric Surgery Update
October 11, 2019 February 28, 2022
I-Paediatric Child Health and Paediatric Surgery Update yaminyaka yonke ibe nesasasa, yesekwa ngodokotela bezingane, odokotela abaqeqeshelwa ukuba ongoti nodokotela abejwayelekile.
Lesi sithangami sihlanganisa abafundisa eNyuvesi YaKwaZulu-Natal (e-UKZN), odokotela bezingane basezibhedlela zikahulumeni nezibhedlela ezizimele nabamele imboni edayisa amakhambi ukuthi babhunge izindaba ezimqoka ezithinta ukunakekela izingane ezigulayo, abazanyana, izingane namabhungu namatshitshi.
Odokotela bezingane bakuzo zonke izindawo ezinkulu zesithangami sokufundisa nokusebenza, okukhona kuzona izibhedlela ezinkulu zaseMpangeni nase-Newcastle, bathekele, bacobelelana ngolwazi nabalingani babo baseThekwini naseMgungundlovu.
Umgqumgquzeli wesithangami uDkt Kimesh Naidoo uthe isithangami besigxile ezihlokweni ezimqoka kulo msebenzi okukhona kuzona ukubhibha kwezingane, okuyimbangela enkulu yokushona kwazo, ufuba nokuqutshulwa yizinto ezithile, ukugula kwezingane okuyimpicabadala nokuthi odokotela bezingane bazinakekele.
USolwazi Refiloe Masekela wase-UKZN uvule umcimbi, wethula inkulumo yosuku ebigxile ohambweni lwakhe lokuba wungoti, ungoti omncane, umcwaningi nomholi. UMasekela ukhulume nakwesinye isithangami sengxoxo ngemigomo emisha yofuba lwezingane.
UDkt Basil Enicker, inHloko ye-Neurosurgery e-UKZN, ukhulume ngokushesha emkhakheni wokuhlola nokwelapha ukuvuvukala ebuchosheni bezingane. Ugcizele ukubambisana kongoti abelaphayo okudingeka uma kunakekelwa izingane ezinje.
Kwethulwe imibiko ngokugula yethulwa udokotela wezingane wase-Prince Mshiyeni Memorial Hospital uDkt Kumaran Moodley nongoti owudokotela wezifo ezithathelanayo zezingane e-Metropolitan Paediatric Department uDkt Fatima Naby, okhulume ngokwelapha ukubheduka kwezifo ezithelelanayo naye wakhuluma ngohambo lwakhe lwase-Pakistan lapho ekade eyofunda khona ngokubheduka kwesandulelangculazi ezinganeni.
UDkt Despina Demopoulos, owudokotela wezingane ezisegunjini lezimo ezibucayi waseGauteng noyilungu lomgwamanda we-SA Paediatric Association, ukhulume ngolwazi lwakhe lokusebenzisa iPro-calcitonin ezinganeni.
UMnyango wokwelashwa kweziNgane wase-UKZN wethule ongoti abangabacwaningi kule ndima nohlelo lokubambisana ezwekazini. Izitshudeni ezimbili ezisanda kugogoda, esezifundela ukuba ngongoti bokwelapha izingane, zethule izinkulumo ngokwelapha ukungunuza nokuthatha kancane ngokomqondo wezingane.
Isithangami sibheke i-Queen Nandi Mother and Child Hospital, isibhedlela esikhulu eselapha izingane zase-Area 3 nesinemibhede ephefumulayo eli-14 nemibhede yasegunjini labagula kakhulu, okuyizinto ezinqabile.
UDkt Constant Kapongo ukhulume ngolwazi lwakhe lweminyaka engama-20 lokwelapha izingane ezizalwa zinesisindo esincane, okuyizingane ezizalwa zingaphansi kuka-1.5kg, kugxilwe endikimbeni yezinto ezenzeka uma sekuzelwe izingane lapho kukhulume khona uDkt Radhika Singh wase-King Edward VIII Hospital noNkk Claire McHugh wase-El Ballito Private Hospital, okhulume ngokufunza lolu hlobo lwezingane.
UNks Tracy Brand waseMduduzi Palliative care unit, inhlangano engenzi nzuzo eyeseka izibhedlela eziningi ezelapha izingane, ukhulume ngokukwazi ukumelana nobunzima kwizisebenzi zezempilo eziphatha izingane ezigulayo noma ezifayo.
UDkt Yasmin Goga ukhulume ngezikamoya nezingane, okuyisihloko esingavamile ukudingidwa noma esingakaze sibhekwe.